ဒီဇာတျလမျးလေးကတော့ သမိုငျးနောကျခံစိတျကူးယဉျ romance drama အမြိုးအစားဖွဈပွီး
၁၉ ရာစုနှဈ ဂြိုဆှနျးပွညျအတှငျး ယောကျြားနှငျ့မိနျးမ လူတနျးစားအလှာအသီးသီးကွားက အတှေးအမွငျ မတူညီမှု မညီမြှမှုတှကေို ပွောငျးလဲဖို့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီးတဈဦးအကွောငျးကို ဇာတျအိမျဖှဲ့ရိုကျကူးထားခွငျးဖွဈပါတယျ
Goo Hae-Ryung (Shin Se-Kyung) ဟာ အမြိုးသားနဲ့အမြိုးသမီးတှကွေားက မညီမြှမှု အမွငျနဲ့ သဘောထားကှဲလှဲမှုတှကေို ပွောငျးလဲရနျအတှကျ ကွိုးစားနသေူပါ
Hae Ryung ဟာ သူ့ရဲ့ကံကွမ်မာကို သူမကိုယျတိုငျဖနျတီးဖို့ကွိုးစားနသေူတဈဦးပါ။
ပွီးတော့ လူသားအားလုံးရဲ့ တရားမြှတမှုကိုလညျး ကာကှယျပေးလိုသူပါ။
Prince Yi Rim ကတော့ ထီးနနျးအရိုကျအရာမငျးသားတပါးဖွဈပွီး တဈဖကျမှာလညျးသူဟာ နာမညျကွီး ဝတ်ထုရေး ဆရာတဈဦးပါ။
Yi Rim ဟာ တဈခါမှ date မလုပျဖူးတဲ့ မငျးသားတဈပါးပါ။ သူဟာဘဝကို အထီးကနျြစှာနဲ့ပဲ နနျးတျောထဲနထေိုငျပါတယျ။
Hae Ryungဟာ နနျးတျောထဲရောကျသှားပွီး အကွောငျးရငျးမသိစှာနဲ့ပဲ prince yi rim နောကျကို လိုကျရပါတယျ
ဒီလိုနဲ့ အထီးကနျြမငျးသားလေး Yi Rim ဟာ stalker Hae Ryung နဲ့တှဆေုံ့ပွီးနောကျ နနျးတျောအပွငျက လောကကွီးအကွောငျးနဲ့ အခဈြအကွောငျးကို လလေ့ာဖို့ဖွဈလာပါတော့တယျ
ဒီလိုနဲ့ မငျးသားလေး Yi Rim နဲ့ Hae Ryung တို့ကွား relationship လေးတဈခု ဘယျလိုစတငျလာမလဲဆိုတာကို drama လေးမှာ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုရအောငျပါ။
အပိုငျး ၁၆ ပိုငျး ပါဝငျမှာဖွဈပွီး အပတျစဉျ ဗုဒ်ဓဟူး ကွာသပတေးနတေို့ငျး MBC ရုပျသံလိုငျးက ထုတျလှငျ့သှားပါမယျ။
Harold and kumar go to white castle လေးတင် ပေး ပါ လား
၃ကား ထွက် ပါ တယ် အရမ်း ရယ် ရ လို့ပါ …ကျေးဇူးပြုတင်ပေးပါနော်
ဂမျးနမျးဗွူးတီးက မငျးသားတော့ သဘောကတြယျ။
Bride of Habaek မှာ သိပျမဆိုးသေးဘူး။
Black Knight မှာ Tempo အတကျအကမြရှိ မကျြနှာသလေေးနဲ့ … ကွညျ့ပွီး တကယျစိတျလသှေားတာ။
Full HD ပါတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတ်ဗျယ
အပိုင်း(4) က Download link မတွေ့လို့ဗျ
Ep 20ထိရှိတာ​နော်​ admin
လေပြေAugust 14, 2019Reply
adminေ၇ အပိုင်းအသစ်တွေ ထပ်တင်ပေးပါအုံးဗျာ။ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ရှိန်တတ်နေပြီးလို့ပါ။ အမြဲအားပေးနေတယ်နော်။
admin အပိုင်းအသစ်ထပ်တင်ပေးပါအုံးနော် စောင့်မျှော်နေပါတဃ် အရင်က အပိုင်း ၁၁ ရတဃ် ၁၂ ကြည့်ချင်နေပါပြီ
နောက်အပိုင်းလေးတွေ တင်ပေးပါအုံးဗျ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
admin ရေ လုပ်ပါအုံးဗျာ။ ကြည့်လို့ကောင်းနေပြီး။ အပိုင်း၁၆ မြန်မြန်တင်ပေးပါဗျာ။ ကြည့်ခြင်လှပြီးဗျာ။ ကျေးဇူးပါနော်။
17 – 18 နောက်အပတ် တင်မှာပါလား ဗျ ?
9,10,11 FHD Down မရဘူး ပြန်ပြင်ပေးပါဦး admin
အသဲတစ်ခြမိးဘေဘီSeptember 13, 2019Reply
အပိုင်း ၁၇ နဲ့ ၁၈ လေးလုပ်ပါအုံးအရမ်ကြည့်ချင်ပြေီ…. မရတော့ဝူး
အသဲတစ်ခြမ်းဘေဘီSeptember 13, 2019Reply
ဟုတ်… စောင့်နေပါ့မယ်… ကျေးဇူးပါ
16 ထိပဲလား​မထွက်​​တော့ဘူးလား admin
အပိုင်း ၁၇ မတင်တော့ဘူုးလား စောင့်နေတာ နှစ်ရက်ရှိပြီလို့
admin အပိုင်းအသစ်တွေ ထပ်တင်ပေးပါအုံးဗျာ။ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အပိုင်းအသစ်တွေ ထပ်တင်ပေးပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးပါ။ အမြဲတမ်း အားပေးနေပါတယ်။ ဒီထက်မက အောင်မြင်ကျော်ကြားပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါ adminရယ်။ အခုလို ဖြေကြားပေးလို့။ ဘယ်လိုင်းက လာတာလည်း မသိဘူး။ skynet တတ်ထားတယ်။ Gold channel movies ကို အားကိုးနေရတာပါ။ မသိလို အမှားပါခံရင် တောင်ပန်ပါတယ်နော်။ ထာဝရ အောင်မြင်ပါစေ။ ထာဝရ အားပေးနေမယ်။
MBC လိုငျးကလာပါတယျ။ Sky net မှာတော့ မရှိပါဘူး။
Admim တို့ ထက်တင်ပေးပါအုံးဗျာ???
ဇာတ်လမ်းက မပြီးသေးဘူးနော်…. ၁၆ ပိုင်းတည်း ဟုတ်လို့လား
ဒီကားကထက်မတင်တော့ဘူးလား စောင့်ရတာတင်းလာပြီ အများကြီးအပိုင်းတွေကျန်သေးတာကိူ
18ရက်‌နေ့ညမှ အပိုင်း 17ကို လွှင့်မှာပါ
I amafan too✌️
အပိုင်း 20 Down လို့မရလို့ပါ
Admin တို့ရေဒီ series နဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ series တစ်ခုအကြောင်းပြောချင်လို့ပါ… The Emperor: Owner of the Mask ပါ… ခု MNTV ကနေတော့လွင့်နေပါတယ်…ဒါပေမယ့် MNTV ကနေစောင့်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်တော့လို့ပါ.. ခုမှအစပဲရှိပါသေးတယ်… ဇာတ်လမ်းကတော်တော်ကိုကောင်းပါတယ်… အဲ့ series လေးကိုလည်း ဘာသာပြန်ပြီးတင်ပေးပါအုံးခင်ဗျာ… Gold Channel ကseries တွေကိုပဲအဆင်တစိုက်အားပေးလာတာပါ… အခု ဒီ series လေးကလည်း ၂၀၁၇ လောက်တည်းကထွက်ထားတာဆိုတော့ admin တို့ရှယ်တစ်ခါတည်းဘာသာပြန်တင်ပေးလို့ရတာပေါ့… ကျေးဇူးပြု၍အဲ့ series လေးလည်းတင်ပေးပါအုံးဗျာ… Thank You ပါ… GCMovie ရေ
အေးအေးအောင်January 23, 2020Reply
အပိုင်း 20 က ဇာတ်သိမ်းလား